Raha manahy momba ny filaminana ianao, dia mividiana Android tsara kokoa noho ny iPhone | Androidsis
Detective forensic Claims Android Encryption dia tsara kokoa izao noho ny iPhone
Manuel Ramirez | | About us, fiarovana
Terrain iray hafa izay amelezan'ny Android an'i Apple miaraka amin'ny iPhone. Amin'ity indray mitoraka ity dia ao anaty encryption izy io ary tsy maintsy raisina avokoa ny zava-drehetra mifandraika amin'ny fiainana manokana. Ary moa ve ireo mpitsikilo mpitsikilo milaza fa ireo finday Android dia sarotra kokoa ny "hack" na "crack" noho ny iPhone.
Mety amin'ny fotoana fantatra izany ny governemanta amerikana dia afaka nandalo tao an-trano tamin'ny alàlan'ny encryption ny iPhone, araka ny nambara farany avy amin'ny Vice. Saingy toa sarotra kokoa ny "miditra" finday Android sasany. Ary izany no fahamarinana izay mahatonga antsika hirehareha amin'ny fanaovana sarobidy kokoa ny finday.
1 Misokatra malalaka ny iPhone
2 Amin'ny Android dia sarotra kokoa
Misokatra malalaka ny iPhone
Detective Rex Kiser izay manao fanadinana dizitaly forensika ho an'ny Departemantan'ny polisy ao Fort Worth, izay manamafy fa herintaona lasa izay dia tsy afaka "niditra" tamin'ny iPhone izy io, fa afaka nanao izany tamin'ny telefaona Android rehetra.
Satria mihoby izy izao, ankehitriny tsy azo ampidirina amina finday Android marobe izy ireo. Araka ny fikarohana nataon'ny Vice, Cellebrite, iray amin'ireo orinasa manandanja indrindra ho an'ny masoivohom-panjakana raha ny amin'ny "famakiana" finday avo lenta, dia manana fitaovana afaka manokatra ny varavaran'ny iPhone vita, na ny iPhone X aza.
La fitaovana dia tompon'andraikitra amin'ny fanangonana tahirin-kevitra toy ny firaketana GPS, hafatra, tantaram-piantsoana, fifandraisana ary koa data vitsivitsy manokana avy amin'ny fampiharana toa Twitter, LinkedIn na Instagram. Amin'izany fampahalalana rehetra izany eo am-pelatanana dia mora kokoa ho azy ireo ny manaraka ny zava-misy marina sy ireo izay tsy rehefa misy orinasa mety mila angona avy amin'ny mpanjifa na izany vaovao miafina izany; tsy ho olo-masina koa isika ary io no izy
Amin'ny Android dia sarotra kokoa
Izay ihany Fitaovana Cellebrite ampiasaina amin'ny encryption Android tsy dia mahomby firy amin'ny terminal malaza. Miresaka ny amin'ny fiafarana avo lenta isika. Ny mpitsongo dia mametraka, ohatra, ny fomba amin'ny fitaovana toy ny Google Pixel 2 na Samsung Galaxy S9 iray ihany, tsy afaka namoaka ny angon-drakitra avy amin'ny tambajotra sosialy, ny tantaran'ny fizahana na ny mifandraika amin'ny GPS ilay fitaovana. Raha mankany amin'ny Huawei P20 Pro isika dia azo lazaina fa tsy afaka naka data izany.
Ilay mpitsongo dia manazava fa ireo fanavaozana vaovao an'ny Android dia "mahatohitra" kokoa rehefa miaro tena amin'ireo fanafihana ireo hitrandrahana angona avy amin'ireo finday nametrahana azy ireo. Mazava izany fa manao ahoana ny fanaovan'ireo orinasa ny zavatra ataony ka manana fotoana sarotra "hidirana" amin'ireo finday ireo ny masoivohom-panjakana hamoahana izay tadiaviny. Ka ny fiainana manokana dia raisina ho zava-dehibe tokoa ho an'ireo orinasa toa an'i Huawei sy Samsung.
Tokony holazaina fa na izany aza andao hanana iray amin'ireo telefaona Android faranyTokony hazava tsara fa tsy midika izany fa azo antoka tanteraka ny fisorohana ny "vaky" amin'ireo fitaovana ireo. Satria tsy miasa ny an'ny Cellebrite dia tsy midika izany fa tsy afaka mamoaka ny angon-drakitra ilainy ny mpikaroka. Izay ihany dia mety hiasa mafy kokoa ny fizotrany ary handany fotoana sy enti-miasa bebe kokoa. Ary efa fantatsika fa izany dia midika fandefasana avo lenta kokoa ho an'ny iray izay mandray ny serivisy sy ilay manome azy ireo.
Ny mazava dia izany Amin'izao fotoana izao ny tampon'ny Android dia azo antoka kokoa noho ny solony izay mety miaraka amin'ny iPhone. Raha manahy momba ny filaminana ianao dia efa fantatrao izay alehany, mankanesa Android avo lenta ary mandehana amin'ireto andalana ireto mba haharaka ny zava-drehetra momba ny rafitra fiasa napetraka indrindra eto an-tany. Ny zavatra atolotray dia ny fanavaozana ny findainao miaraka amin'ireo patch farany azo antoka toy ny mitranga amin'ny Realme izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Detective forensic Claims Android Encryption dia tsara kokoa izao noho ny iPhone
Ny "Battle Chess" tsara indrindra amin'ny taona dia eto: Might & Magic Chess Royale miaraka amin'ireo lalao misy eo anelanelan'ny mpilalao 100
Samsung dia namidy smartphone efa ho 2019 tapitrisa tamin'ny taona 300